Sheekh Nuur Baaruud oo deeq lacageed gaarsiiyay gabar yar oo ku xanuunsan Muqdisho – Radio Muqdisho
Sheekh Nuur Baaruud oo deeq lacageed gaarsiiyay gabar yar oo ku xanuunsan Muqdisho
Sheekh Nuur Baaruud ayaa maanta lacag ay soo dhiibeen muwaadiniin Soomaaliyeed gaarsiiyay hooyada dhashay gabar yar oo cudurka Kansarka uga dhacay qeybo ka mid ah wajigeeda.
Lacagtan oo ay soo direen Muwaadiniin Somaaliyeed oo ku kala nool qaar kamid ah Dalalka Yurub iyo Mareykanka ayaa gudoomiye ku xigeenka Hay’adda Culimada Somaaliyeed Sheekh Nuur Baaruud Gurxan waxa uu ku wareejiyay Nimco Xasan Tifow oo ah Hooyada dhashay gabar yar oo la xanuunsaneysa cudurka Kansarka oo sanka iyo indhaha uga dhacay islamarkaana xaaladeeda caafimaad dalka wax looga qaban waayay sida ay dhaqaatiirtu sheegeen.
Lacagtan oo gaareysay $4,000 ayaa waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo Maryan Cismaan Jimcaale oo ah gabadha xanuunsan.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo saxaafadda la hadlay ayaa u mahadceliyay shaqsiyaadkii lacagta soo dhiibay wuxuuna xusay in wali ay caawimaad u baahan tahay gabadhaasi xaaladeeda dalka wax looga qbana waayay.
“waxaan hada gacanta ku hayaa lacag gaareysa $4,000 oo la soo diray dadkii soo diray dadkii soo dirayna magaooda waa la sheegaa waxaa kaloo aan rabnaa inaa idiin sheegno in la sameeyay akoon cusub oo gabdha loo furay si loogusoo diro gudo iyo dibadba waxaan rabnaa kheyrkaas in loosoo degdego lacagtaasi $4,000 anigoo wakiil ka ah dadkii soo diray waxaan ku wareejinayaa Maamada dhashay gabdha” ayuu yiri Sheekh Nuur
Nimco Xasan Tifoow oo ah Hooyada dhashay Maryan Xasan Cismaan Jimcaale oo ah gabdha la xanuunsaneysa Kansar sanka iyo indhaha uga dhacay ayaa markii lagu wareejiyay lacagta loogu talagalay gabadheeda kadib la hadashay warbaahinta waxayna u mahadcelisay cidkastoo ka qeybqaadatay caawinta gabadheeda
“bismillah waxana meeshaan uga mahadcelinaa Sheekh Nuur Baaruud iyo dadkii lacagtana usoo direen iyo intii soo xasuusatay gabadheyda xanuunsan ajir iyo xasanaad alle ha kasiiyo muslinka ayaan wax ka sugeynaa gabadha aad ayay iiga xanuunsna tahay sidaas ayaan rajeynaa” ayeey tiri hooyo Nimco Xasan Tifoow.
Maamulka Jaamacadda Capital oo barnaamij soo dhaweyn ah u sameeyay arday ku guuleysatay imtixaanka Qabuulka+Sawirro
Wasaaradda Ganacsiga oo fariin u dirtay ganacsatada Soomaaliyeed ee badeecadaha dalka keena